दुबईमा आफ्नै जन्मदिनको दिन एक नेपालीको मृ त्यु, परिवार शोकमा – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/दुबईमा आफ्नै जन्मदिनको दिन एक नेपालीको मृ त्यु, परिवार शोकमा
दुबईमा आफ्नै जन्मदिनको दिन एक नेपालीको मृ त्यु, परिवार शोकमा
काठमाडौं – दुबईमा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृ त्यु हुनेमा मोरङ बेलबारीका ५२ वर्षीय दीपक पराजुली रहेका छन् । उनको दुबईमा आइतबार मृ त्यु भएको हो । आइतवार उनको आफ्नै जन्मदिनको दिन मृ त्यु भएको हो ।
सामान्य ज्वोरो आएपछि औषधि खाँदै कोठामै बसेका दिपक एक्कासी ढलेका थिए । ढले लगत्तै त्यहाका साथीभाइले उनलाई एनएमसी रोयल अस्पताल लगेका थिए । तर उनको अस्पतालमै मृत्यु भएको जनाइएको छ । १० वर्ष पहिले यूएई गएका उनी ट्रान्सगार्ड सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत थिए । उनको श्रीमती र दुई छोरा छन् ।
काठमाडाैं, १६ वैशाख । छिमेकी राष्ट्र भारतमा को रोना सं क्रमितहरुको संख्या २९ हजार नाघेको छ । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म भारतको को रोना सं क्रमित हुनेको संख्या २९ हजार ४१५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा १ हजार ५ सय ६१ जना नयाँ को रोना सं क्रमित थपिएका छन् भने ५८ जनाको मृ त्यु भएको छ । योसँगै भारतमा को रोनाबाट मृ त्यु हुनेको संख्या ९ सय ३९ पुगेको छ ।
यसैबीच ७ हजार १ सय ३७ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किइसकेका छन् । साेमबार बिहानसम्म भारतमा काे राेना सं क्रमितकाे संख्या २७ हजार ८९० थियाे भने मृ त्यु हुनेको संख्या ८ सय ८१ थियाे । विश्वमा को रोना भा इरसबाट सं क्रमित हुनेकाे संख्या ३० लाख ६२ हजार पुगेकाे छ । हालसम्म काे राेना भा इरसबाट ज्या न गुमाउनेकाे संख्या २ लाख ११ हजार ४३३ पुगेकाे छ ।
काठमाडौं, १६ बैशाख । आज बस्ने भनिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक तय नभएको बुझिएको छ । हिजो (सोमबार) राति अबेरसम्मपनि सचिवालय बैठक बोलाउनेबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावलले जानकारी दिए ।
यद्धपी हिजो बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र नेता नेपाल समूहबीचको छलफलमा सचिवालय बैठक आज बोलाउने भन्नेबारे सहमति भएको कुरा बाहिर आएको थियो । तर, रावलले राति अबेरसम्मपनि उक्त बैठक बस्ने कुनै टुँगो नभएको जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष दाहाल, बरिष्ठ नेताद्धय नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत एकमत देखिएका छन् । कतिपयले यो शक्ति संघर्षले कतै नेकपा फुट्ने त होईन ? भनेरपनि विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
कीर्तिमानी स्तर पार गर्दै आकाशियो सुनको भाउ ,हेर्नुहोस आज को मुल्य
श्री एअरलाइन्सको जहाजमा आकाशमा उड्दा उड्दै चिरा परेर भ्वाङ्ग परेपछि….
तीन दिनदेखि वेपत्ता प्रहरी जवान पनि मृत अबस्थामा भेटिए
सडक, पसल पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय